Murume Akakwegura uye Gungwa, iro basa rakaita kuti Hemingway mubairo weNobel Prize | Zvazvino Zvinyorwa
Juan Ortiz | | Vanyori, Novela, Nyaya
Chembere negungwa (1952) ndiro rinozivikanwa basa rekunyepedzera kweAmerican Ernest Hemingway. Mushure mekuburitswa kwayo, munyori akadzokera kunhandare yekunyora. Iyo rondedzero yakafuridzirwa nezvakamboitika zvemunyori semuredzi wehove muCuba. Mumapeji anodarika zana negumi, akatora zviitiko zvemufambi wechikepe uye kurwira kwake kubata hove huru yemarlin.
Iyi pfupi nyaya yakatanga kuburitswa mumagazini upenyu, iyo yakafadza Hemingway, sezvo bhuku rake raizowanikwa kune vanhu vazhinji vaisakwanisa kuritenga. Mubvunzurudzo akataura: "... izvi zvinondifadza zvakanyanya kukunda kuhwina Nobel." Neimwe nzira, aya mazwi akave anotyisa, se munyori akapihwa mubairo weNobel weMabhuku muna 1954.
1 Pfupiso yeThe Old Man uye Gungwa (1952)
1.1 Hondo huru
1.2 Kuguma kusingatarisirwe
2 Kuongorora kweThe Old Man uye Gungwa
2.2 Chimiro show
2.3 Dudziro dzakasiyana
3 Imwe nhoroondo yehupenyu yemunyori
3.1 Kutanga muutapi venhau uye yekutanga hondo yenyika
3.2 Munyori wehondo
3.3 Zvinyorwa zvinyorwa
Pfupiso ye Chembere negungwa (1952)
Santiago es mubati wehove anozivikanwa muHavana senge "chembere". The iri kupfuura nepakaoma chigamba: zvimwe zve Mazuva makumi masere pasina tora michero ye hove. Akatsunga kuchinja hupfumi hwake, anomuka mangwanani kuti apinde maGhuba mafungu, zvese zvinoita kunge zviri nani kana zvichiruma pachirauro chake hove dzemumvura. Anoona dambudziko guru iri senzira yekuratidza vamwe hunyanzvi hwake.
Harahwa yakarwa nayo kwemazuva matatu ichimurwisa chikuru uye chakasimba hove; panguva yemaawa marefu zvinhu zvakawanda zvakapfuura nepfungwa dzake. Pakati pavo, ake apfuurariini mukadzi wake akararama uye akanakidzwa kubudirira pabasa ravo. Akarangarirawo Mandolin, murume wechidiki waakadzidzisa basa kubva achiri mudiki uye anga ari shamwari yake yakatendeka, asi akatama.
Santiago akapa zvese, uye nekumwe kuedza kwekupedzisira vakakwanisa kuchengetedza hove achimukuvadza nembira yake. Achidada nebasa rake, akafunga kudzoka. Kudzokera kumunda kwanga kusiri nyore zvachose, nekuti mubati wehove wekare aifanira kubata nehove dzaivhima kubata kwake. Kunyangwe akarwa nevakawanda, zvishoma nezvishoma ivo vakakwanisa kudya hove hombe uye kusiya chete mafupa ayo, ayo aikonzera manzwiro ekukundwa mudhara.
Kwadoka masikati, Santiago akasvika kumahombekombe; akasiya chikepe chake uye zvasara zvehove huru ndokuenda kumba ndaneta uye ndakasuruvara zvakanyanya. Kunyangwe painge pasina chinhu chakasara pamarlin, munhu wese mumusha akashamiswa nekukura kwehove yakadaro. Mandolin aiveko ndokuona kusvika, uye akazvidemba kuti akasiya mudhara, saka akavimbisa kumuperekedza zvakare pabasa.
Murume mukuru negungwa ...
Analysis of Chembere negungwa
Iyo nyaya ine yakajeka uye yakapusa mutauro, iyo inobvumira kuverenga kwakanaka uye kunonakidza. Kunyangwe isina mapeji akawandisa - tichienzanisa nemamwe enganonyorwa -, inopa dense uye zvemukati zvemukati. Kune dzidziso zhinji dziripo mune ino rondedzero, iyo, mukuwedzera, inoenderana nedudziro yemuverengi. Ndokusaka iwe uchigona kuwana akasiyana maonero nezve iri basa.
Iyi pfupi nyaya inoratidza yakasarudzika manyorero emunyori. Anounzwa gamba - Santiago, wekare mubati wehove - uyo, kunyangwe akwegura, haaneti. Senguva dzose, pane nyaya yekunyepedzera: kushaya hove; zvisinei, nyaya yacho inopfuurira. Hunhu hunopfuura nemamiriro ezvinhu akateedzana evanhu, senge kusurukirwa, kuora mwoyokana kurasikirwa, asi anozvirarama zvese pasina kurasikirwa nekuda kwake uye neushingi.
Isu takatarisana neyavanodaidza kuvhura kupera. Nyaya haina mhedzisiro, sezvo zvisina kutaurwa zvinoitika chaizvo neSantiago. Naizvozvo, zvese zvakasara kududziro yemuverengi. Semuenzaniso, kusuwa uye kukundwa uko mubati wehove anodzokera kumba zvinogona kududzirwa semugumo wehupenyu hwake.
Pasina mubvunzo, Murume mukuru negungwa Iri ibhuku rinoita kuti iwe ufungisise pamamiriro mazhinji ehupenyu. Kunyangwe iine semusoro wenyaya waro rwendo rwembwa wehove wehove achipfuura nepakati pechigamba, nyaya yacho inobata zvimwe zvibodzwa, se: ushamwari, kuvimbika, kutsungirira, kusatya, kudada, kusurukirwa y rufu, kungodudza mashoma.
Imwe nhoroondo yehupenyu yemunyori
Munyori uye mutori wenhau Ernest Miller Hemingway akaberekwa neChishanu, Nyamavhuvhu 21, 1899 mu Oak Park Village kuchamhembe kweIllinois. Vabereki vake Vaiva: Clarence Edmonds Hemingway naGrace Hall Hemingway; iye, anozivikanwa gynecologist; uye iye, anokosha muimbi uye muimbi. Vaviri vaive nhamba dzinoremekedzeka munharaunda inochengetedza yeOak Park
Ernest akaenda kuOak Park uye River Forest High Chikoro. Mugore rake junior, akapinda - Pakati pezvidzidzo zvakawanda-- kirasi yevatapi venhau, yakarairwa naFannie Biggs. Mune iyi nyaya, vanyori vakanakisa vakapihwa nekuburitswa kwezvinyorwa zvavo mupepanhau rechikoro, rakanzi: Iyo Trapeze. Hemingway akakunda nekunyora kwake kwekutanga, zvanga zviri nezveChicago Symphony Orchestra uye yakaunzwa muna 1916.
Kutanga muutapi venhau uye yekutanga hondo yenyika
Muna 1917 - mushure mekuramba kuenda kukoreji - akatamira kuKansas. Ikoko akatanga basa rake semutori wenhau mupepanhau Kansas City Star. Kufunga kwekungogara munzvimbo ino kwemwedzi mitanhatu, akawana ruzivo rwakakwana kuti aite rake ramangwana mabasa. Gare gare akabatana neRed Cross kuenda kuWWIIkoko akashanda semutyairi weambulensi pamberi peItari.
Mushure metsaona muamburenzi, Ernest aifanira kudzokera kumusha kwake, kwaakadzokera kunhau. Muna 1937 akaenda kuSpain semunyori neNorth American Newspaper Alliance kuvhara iyo Spanish Civil War. Gore rakatevera, akataura zviitiko zveHondo yeEbro uye ari pakati peHondo Yenyika II akaona D-Day, kwakatangwa Operation Overlord.
Hemingway yaionekwa sechikamu cheChizvarwa Chakarasika, boka revaAmerica vakatanga basa ravo rekunyora mushure meHondo Yenyika Yekutanga. Imhaka yeizvozvo mabasa ake anoratidza kuora mwoyo uye kusava netariro kwenguva yakaoma. Nhau dzake uye enganonyorwa anozivikanwa nekunyorwa murondedzero yeprozi, nemitsara mipfupi yekuzivisa uye nekushandisa kushoma kwezviratidzo zvemukati.
Munyori yakaonekwa seine yakasarudzika dhizaini, iyo yakaratidzira pamberi nepashure mundima yekunyora. Nhoroondo yake yekutanga, Fiesta (1926), akatanga basa rake. Iri basa rakaratidza nzira chaiyo yekunyora, kune iyo Hemingway inonzi: iyo iceberg dzidziso. Nezvo, munyori anochengetedza Pfungwa yenyaya haifanire kuendeswa yakananga kumuverengi, asi inofanira kumira pachena.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Chembere negungwa
Mhoro zita rangu ndinonzi Areli uye ndaida iyi blog, ndaiwana ichifadza chaizvo uye ndichadzoka kazhinji nekuti nzira yekuratidza zvirimo inogadzira uye inonakidza zvekuti kwatiri isu vanoda kuverenga inotikurudzira kuverenga zvimwe uye kudzidza zvakawanda nezve nyika yekunyora. Chokwadi ndechekuti ndainyanya kufarira blog iyi nekuti kwekanguva ndainzwa sekasikana mudiki muchitoro chezviwiti ndisingazive chinotapira kusarudza zvese, zvinoita kunge zvinonakidza zvekuti ndinoda kuverenga zvese yaaa.
Sara Gutierrez. Kubvunzana nemunyori weZhizha Rokupedzisira reUSSR
Iye monk Akatengesa Ferrari Yake